Microsoft band 2 ongororo
Kuru Nhau & Ongororo Microsoft Band 2 Ongororo
Microsoft Band 2 Ongororo
Kana isu tichifunga nezve mafitness bhandi, chekupedzisira kuuya mupfungwa kune vanhu vazhinji chingangove chiri Microsoft, asi hazvifanirwe & rsquo; t, sepakutanga Microsoft Band yakazviratidza pachayo pakuve yeSwiss Army Knife yemhando dzechikamu - chakabatanidzwa neyakaenzana yakakwana yehutano hwehupenyu pamwe chete. Kudzoka kumativi maviri, iyo Microsoft Bhendi 2 ine chinangwa chekukanda chero chekunyunyuta kukuru nezveiyo yekutanga modhi, ichiona ichitamba yakatsetseka pasuru uye new kuratidza.
Sezvineiwo, hazvo, iyo & rsquo; yakarova nemutengo wepamusoro wekusvitsa we $ 249.99, kubva kune yakatangira & rsquo; s mutengo wekutanga we $ 199.99. Iyo & rsquo; s chipo chakakura uchifunga nezve icho & rsquo; chiri kukwikwidza kupokana muchadenga, asi rega & rsquo; t chiise kuburikidza nepaces kuti uone kana ichigona kukunda pamusoro peiyo inokosha real estate pachiuno chako.
Microsoft Bhendi 2
Magnetic USB tambo charger
Yakagadziriswa uye yakawanda ergonomically yakashatiswa, iyo Band 2 inotaridzika uye inonzwa zvirinani zvirinani.
Unoda kuziva chii & rsquo; inonyanya kuvandudzwa nezveiyo Bhendi 2? Zvakanaka, iyo & rsquo; haina imwe kunze kwekugadzirwa kwayo, iyo nekutenda haina kuita kunge hulky kana gargantuan segore rapfuura & rsquo; s modhi. Izvo & rsquo; s zvirokwazvo zororo! Kunyangwe iri & rsquo; s ichitamba mutauro wakafanana dhizaini sepakutanga, inogadziriswa yerabha bhendi yakapfekwa pachiwoko, inonyaradza kuona Microsoft ichidzikamisa zvakanyanya - iko iko kwakanyanya nzvimbo iko iko iko iko kune clasp. Izvo zvinhu zvinoshandiswa pano inyanzvi thermal epurasitiki elastomer silicone vulcanite (TPSV), iyo iine iyo yerabha mameseji inonzwa kwazviri.
Mukuita kwekuipa iwo wakafanana muviri, ivo & rsquo; ve zvakare vakavandudza kukodzera kwayo uye kunyaradzwa kutenderedza ruoko rwedu. Ino nguva yakatenderedza, inokwenenzvera ruoko rwedu zvirinani nekuti iyo nyowani nyowani pano yave yakakombama, ichipa irinani ergonomic chimiro kuti igare paruoko rwedu. Nekudaro, kana iwe ukaitika kuti neya boney hump inobuda kubva pachiuno chako, iyo Band 2 dzimwe nguva inogona kukonzera kusanzwisisika zvishoma nekuti pane & rsquo; s nzira shoma kwazvo yekuti ikwanise kuwedzera. Kunyangwe zvakadaro, & rsquo; ichiri yakanaka kuziva kuti ivo & rsquo; vacheka mafuta mazhinji kubva pane ino.
Zvakawanda sevamwe vateedzeri vekusimba, iyo Band 2 ine imwe nhanho yekudzivirira mvura. Sekuisa kweMicrosoft, IP67 yakasimbiswa kuvaka kweBand 2 nehunyanzvi inovimbisa kuti inodzivirira guruva uye inopa kudzivirira kubva mukunyudzwa kwenguva pfupi mumamita 1 emvura kwemaminitsi makumi matatu. Muchokwadi, zvakadaro, Microsoft inodzivisa vashandisi kupfeka iyo Bhendi pavanoshambira kana mushawa. Iyo & rsquo; s inosuruvarisa nekuti isu tanga tichitarisira kuona ayo mvura-kuramba ichivandudzwa, asi pachinzvimbo, isu tichiri kufanirwa kufunga nezve inguva dzipi dzekusapfeka.
Kunyangwe neyakajeka dhizaini, iyo Bhendi 2 inovaka zvese zvinoriumba nema sensors akawanikwa neakafanotangira - saka izvo zvinosanganisira 3-axis accelerometer, gyrometer, GPS, ambient light sensor, ganda tembiricha sensor, capacitive sensor, galvanic ganda mhinduro sensor, uye maikorofoni. Zvimwe zviviri zvitsva zvinowedzerwa kucherechedzwa, zvisinei, zvinosanganisira iyo barometer nyowani iyo inogona kuyera shanduko mukukwira, iyo inobatsira kana iwe & rsquo; re kukwira nhanho, uye iyo UV sensor yakadzamirwa mukati meiyo clasp iyo inogona kuyera huwandu hweiyo ambient UV mwenje. Ehezve, izvo & rsquo; zvinobatsira kune avo vane simba rakasimba kune mwenje.
Uye pakupedzisira, kana zvasvika pakubhadharisa iyo Bhendi 2, Microsoft inovandudza maitiro nekumisikidza mapini ekuchaja kumagumo eiyo clasp - uko inoenderana nemagineti USB charger inokurumidza kusimbisa kubatana.
Iyo switch kune yakakomberedzwa skrini uye AMOLED tekinoroji inogamuchirwa!
Iyo Bhendi 2 & rsquo; s inoshamisa yakavandudzwa dhizaini inofungidzirwa kune iyo nyowani yakakombama kuratidza iyo & rsquo; s kurongedza pane, iyo ine tsoka ye1.25 x 0.50 inches. Iyo tekinoroji ndeye AMOLED uye resolution inomira pama pixels e320 x 128, ayo anounza ruzivo runogamuchirwa uye kupinza kunotibvumidza kuti tishande nesimba kuverenga meseji pachiratidziri chayo. Mune ruzivo rwedu, iyo AMOLED pani pano inounza punchier, yakasimba kusarudzwa kwemavara kupfuura iyo TFT pani inoshandiswa neakatangira. Don & rsquo; usanetseke nezvekuonekwa kwayo kunze, uko ma AMOLED anowanzoita zvisirizvo, kunyanya nekuti inoburitsa yakakwana punch ine simba nekupenya kwayo.
Kwete chete chinoshanda ndechekunyoresa zvinobata uye zvekutsvaira, asi & rsquo; yakanaka kuziva kuti & rsquo; isinganyanye kukwenya nguva ino kutenderera - chaive chinhu chinonetsa neiyo yekutanga Bhendi. Izvo & rsquo; s nekuti iyo yakakomberedzwa skrini inochengetedzwa neGorilla Girazi 3, uye isu tinofanirwa kubvuma, inoita basa riri nani kwazvo pakudzivirira kubva mukukwaya. Uye nekuda kwehunhu hwayo hwakakombama, inosangana mushe nemuviri & rsquo; yiyunifomu yunifomu pachiuno chedu - nepo zvisati zvaitika, kumucheto kwakatetepa kwakumbundira ruoko rwedu hakuna kuita kuti zvive zvakasununguka kupfeka.
wedzera nharembozha $ 50 chirongwa
apple wachi se nguva dzose pachiratidziro
Maitiro ekutora Night Mode selfies pane iPhone 12 / Pro
5 yepamusoro-yakatemwa antivirus uye chengetedzo maapplication eApple mafoni uye mahwendefa
Samsung iri kupa imwe-inovhenekera Galaxy S20 dzakateedzana zvekutengeserana-muzvibodzwa
Kodhi-yekuchera matipi kuti ingani RAM inogona kunge iine iyo X X, 8 uye 8 Plus